Omenala Greece | Akụkọ njem
Mariela Carril | | omenala, Greece
Greece Ọ bụ otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya kacha ewu ewu n'ụwa. A sị ka e kwuwe, ọ bụ ebe obibi nke ọchịchị onye kwuo uche ya n'Ebe Ọdịda Anyanwụ nke oge a na ọbụna taa mkpọmkpọ ebe nke ụlọ ya na ụlọ arụsị ya na-eme ka anyị na-atụ egwu.
Ma kedu ka omenala Gris si dị taa? Kedu ihe anyị nwere ike ikwu maka ya, gbasara omenala ndị obodo ya, gịnị ka a ga-ama tupu ịga ...?
2 Omenala Greece
Na eze, a na-akpọ ya República Helena ma bụrụ na ndịda ọwụwa anyanwụ Europe. O nwere ihe dị ka nde mmadụ 10, ntakịrị karịa, yana isi obodo ya na obodo kachasị mkpa bụ Atenas. Obodo a dị nke ọma n'ụdị ụzọ kachasị mma na kọntinent ahụ, na-esonyere Africa na Asia.
Greece nwere akụkụ kọntinent na akụkụ buru ibu nke ebe Dodecanese Islands, Ionian Islands, Crete, Aegean Islands pụtara ... Anyị bụ ndị nketa nke sayensị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya, mgbakọ na mwepụ ya, ihe nkiri ya, akwụkwọ na nkà ihe ọmụma.
Mgbe ị na-ekwu banyere omenala obodo, ị na-ekwu kpọmkwem otú ndụ ya dị na otú ndị obodo ya si ebi ndụ. Anyị na-ekwu maka ya nri, okpukperechi, nkà ihe ọmụma nke ndụ, nka, ndụ ezinụlọ, mmekọrịta ọha na eze ...
Dabere na Jehova okpukpe Greece Ọ bụ ezie na okpukpe niile dị, e nwere Chọọchị Ọtọdọks nke Gris o nwekwara mmetụta dị ukwuu n’obodo. Enwere ụlọ ụka n'ebe niile, ọbụlagodi n'obodo nta, na ụlọ nsọ ahụ bụ ezi obi nke ebe ahụ. Ụka, ụlọ ụka gbasasịrị ebe a na ebe ahụ, ọbụna n'ebe dị iche iche, ndị dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ nwere ọmarịcha echiche nke oké osimiri.
Chọọchị Ọtọdọks nke Greek Ọ bụ ụka Ndị Kraịst nke abụọ kasị ukwuu O nwekwara ihe dị ka nde mmadụ 220, opekata mpe, nke ahụ bụ ihe ndekọ baptizim na-ekwu. O nweghị ọnụ ọgụgụ dị ka nke Pope, mana e nwere Ecumenical Patriarch nke Constantinople nke ndị bishọp niile ghọtara dị ka onye mbụ n'etiti ndị ọgbọ. Ụka a emetụtala ọwụwa anyanwụ, ndịda ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ Caucasus.
Na mmekọrita Ndị Gris ji ezinụlọ kpọrọ ihe nke ukwuu. A na-atụ anya ka ndị na-eto eto na-elekọta ndị okenye ha, bụ́ ndị na-ebikarị n’ebe dị anya ma ọ bụ nwee ike ibi n’otu ezinụlọ ha na ezinụlọ ha. Ihe nketa ezinụlọ, ihe nketa nke ndị nne na nna na ndị nne na nna ochie, na-ebu ibu dị ukwuu, ma nke akụ na ụba na nke uche. Ọgbọ ndị ochie na-achọkarị ịdị nwayọọ nke ndụ, na-enweghị ọtụtụ elekere, yabụ nke ahụ bụ ihe ị ga-atụ anya mgbe ị na-ahapụ Athens ma ọ bụ obodo ndị ọzọ. A ga-ekwukwa otú ahụ na 80s, Greek Civil Code gbanwere n'okwu gbasara iwu ezinụlọ: alụmdi na nwunye obodo pụtara, e wepụrụ ego ole ahụ, kwado ịgba alụkwaghịm na nna nna tọhapụrụ ntakịrị.
Otú ọ dị, otu ihe ahụ na-eme n'ebe ọrụ dị ka mba ọ bụla ọzọ dị n'ebe ọdịda anyanwụ. Ndị Grik ha na-arụ ọrụ opekempe awa asatọ ụbọchị ise n'izu, n'ihi ya, ha na-anọ ọtụtụ oge n'èzí. Ọtụtụ ndị mmadụ, na mgbe m na-ekwu ọtụtụ ihe m na-ekwu ọtụtụ ihe, na-arara onwe ha nye ụwa nke njem nlegharị anya. Ọtụtụ n'ime ya ozugbo ma ọ bụ na-apụtaghị ìhè Akụ na ụba mba gbagharịrị na njem nlegharị anya, ihe nke taa dị nnọọ mgbagwoju anya.
Ndị Gris hụrụ ụlọ ihe nkiri ahụ n'anya kemgbe ọtụtụ puku afọ na ọ ga-ezuru ileta amphitheater iji mata ya. Ị ga-alaghachi na ihe nkiri oge ochie nwere ụdị abụọ ya: ihe nkiri na ọdachi na aha dịka Euripides ma ọ bụ Sophocles, mana ịhụnanya maka ihe nkiri na-aga n'ihu ruo taa na ọtụtụ oge n'otu ụlọ ihe nkiri oge ochie. Ahụmahụ e nwere n'ebe ndị ahụ dị egwu. Ebumnuche: Epidaurus na Odeon nke Herodes Atticus.
Na ihe banyere Grik gastronomy? Ị gaghị enwe mmechuihu, n'ezie: akwụkwọ nri ọhụrụ, cheeses, anụ, mmanụ oliv, ihe kacha mma na onye nnọchiteanya nke oku. nri Mediterranean. Ị nweghị ike ịpụ na Gris na-agbalịghị suvláki, yemista, pastítsio, musakas, baklava, katafai... Enwere ụfọdụ croquettes tomato e ghere eghe bụ ihe na-atọ ụtọ ... Ebee ka ị nwere ike iri ihe a niile na ọtụtụ ihe ndị ọzọ? Ọfọn, n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ọ bụrụ na ha dị obere ma mara nke ọma, ka mma. Otu iko nke uzo na ndị mezedes ma nụ ụtọ okwu ahụ.
O doro anya, Gastronomy dịgasị iche dabere na mpaghara Gris. Dịka ọmụmaatụ, n'ebe ugwu nke mba ahụ, nke Alaeze Ukwu Ottoman na-achị ruo 1912, nri ka na-egosipụta mmetụta Ottoman.
Nke bụ eziokwu bụ na ụzọ ndụ Grik nwere ọdịiche dị iche iche dabere na oge nke afọ. Oge okpomọkụ ebe a na-ekpo ọkụ nke ukwuu ka ndụ mmadụ dị n'èzí. Ọ na-emekarị na n'ime obodo na obodo nta, mgbe anyanwụ dara, ndị mmadụ na-apụ maka njem n'okporo ámá ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ bụ àgwàetiti, n'akụkụ ụsọ oké osimiri. Ọ bụ kpochapụwo ijeụkwụ. Ma n'oge okpomọkụ na oyi cafes na-arụ ọrụ mgbe niile, ọ bụ ezie na a na-enwekarị ọtụtụ ụmụ nwoke.
Na gịnị banyere ezumike na ezumike? Oge mmemme kacha mkpa bụ Ista na Mkpebi nke Meri n'etiti August. Ista bụ ezigbo ezumike ezinụlọ na ndị mmadụ na-alaghachikarị n'ụlọ ha, n'obodo ndị ọzọ, n'obodo ukwu ma ọ bụ n'obodo nta, ka ha na ezinụlọ nọrọ ya na ime nchegharị n'ime ụka obodo n'abalị Satọde ruo mgbe ọkụ dị nsọ ga-enwu n'etiti abalị. N'aka nke ọzọ, August bụ ọnwa ezumike, dị ka a pụrụ isi kwuo ya.
Anyị amaralarị na omenala Gris oge ochie dị oke mkpa, mana a ga-ekwurịrị ya na Greece ọgbara ọhụrụ omenala na nka nwekwara ọnọdụ ha. Dị ka anyị kwuru, ụlọ ihe nkiri ka dị ndụ ma ọ dịkwa enwere mmemme egwu na egwu egwu, karịsịa na ọnwa okpomọkụ, n'akụkụ nile nke mba na ndị na-ese ihe na mpaghara na mba ụwa. Dịka anyị na-akpọ ụlọ ihe nkiri Epidaurus ma ọ bụ Herodes Atticus, ịnọ na Acropolis oge ochie nke Athens ịga egwu enweghị nha.
Kedu egwuregwu ndị Gris na-amasị? bọọlụ, bọọlụ bụ egwuregwu mba ọ bụ ezie na ọ na-eso ya nke ọma basketball. N'ezie, na asọmpi mba ụwa, basketball emeela ma na-eme nke ọma karịa football Greek. A na-eme egwuregwu ski, ịga njem, ịchụ nta, hockey, baseball ebe a ...
Ndụmọdụ ụfọdụ: ekele a na-ahụkarị n'etiti nwoke na nwanyị bụ ịgba aka, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ọ bụ ajụjụ ndị enyi enwere mmakọ na nsusu ọnụ, ọ bụrụ na enwere ọdịiche afọ na nke okenye, a na-emeso ya n'ụzọ nkwanye ùgwù. maka aha nna ma ọ bụ aha, opekata mpe ruo mgbe a kpọrọ anyị ka anyị kpọọ ya aha mbụ ya, "Yassas" pụtara ndewo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Greece » Omenala Greece